Obodo kacha mma na Spanish iji leta ụgbọ ala na mmiri | Akụkọ Njem
Akụkọ Njem | | Ebe njegharị
Jiri eziokwu ahụ bụ na oyi na-apụ nwayọ nwayọ ma ọnọdụ okpomọkụ na-adịwanye ọkụ site na ị gara ileta otu n’ime nke 6 kacha mma obodo na Spain na-eji a obi ụtọ ezumike n’oge opupu ihe ubi.
Y ... Kedu ihe dị mma karịa iji ụgbọ ala anyị? Anyị na-etinye ihe Ogwe ụlọ ka anyị ụgbọala na njem! Dị njikere ịchọpụta obodo kacha elu maka oge a? Nọgide na-agụ!
2 Val de Boí, Lleida
5 Córdoba na patio ya na May
Ee n'ezie. Madrid bụ obodo mara mma. O nwere ike ịjụ ezigbo oyi n’oge oyi ma ọ bụrụ na i si n’obodo a na-ekpo ọkụ, ị nwekwara ike ịmụrụ ezigbo oge ọkọchị ma ọ bụrụ na ị si n’obodo oyi. Ma, ọ na-ejikere ịlọ ụwa ma na-agbawa n’oge opupu ihe ubi. Anyanwụ, na-adị ọkụ ugbu a karị jiri nwayọ na-agagharị n'okporo ámá ndị mara mma na ogige ntụrụndụ.
N'oge opupu ihe ubi, ị nwere ike ịga ije na Ezigbo ezumike nká (gbazite ụgbọ mmiri na ọdọ mmiri), buru njem igwe kwụ otu ebe site na Parque Juan Carlos I ma ọ bụ Madrid Río. Ma ọ bụrụ n’ịchọghị ịga ije, anyị na-akwado ka ị gaa njem njegharị obodo na bọs ndị njem na-emeghe iji jiri ihu igwe dị mma ma ọ bụ soro ụzọ ụgbọ ala gị: Nhọrọ kachasị mma na nchekwa!
Ma gịnị kpatara ya banye ụgbọ ala USB ma nwee mmasị na isi obodo Spanish si n'elu, mgbe ị na-asa ahụ na ụzarị anyanwụ nke anwụ?
Ọ bụrụ na ọ bụghị oke ọkụ n'èzí, ị nwere ike mgbe niile gaa na Royal Obí na Katidral Almudena.
Val de Boí, Lleida
Ọdịdị dị iche iche nke Spanish na-eme ka o sie ike ikpebi ebe kachasị mma.
Otú ọ dị, anyị na-ahọrọ ihe pyrenees n’ihi na n’oge opupu ihe ubi a ka nwere snow n’elu ugwu ndị kachasị elu, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-agba agba na ndagwurugwu ma mmiri si n’akụkụ niile na-asọpụta, na-eme ka osimiri ahụ jupụta n’ike. Ọ dịghị ụdị nyo dị mkpa n'ihi na ubi na-ere ọkụ na okooko osisi ọhịa, anwụ na-acha na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ. Bọchị na-agbatị, ihe niile na-agbakọta iji mepụta ọmarịcha ọnọdụ.
Obi dịkwa anyị ụtọ obere obodo nwere ulo okwute, slate na taịl ya na ite okooko osisi ya na windo ya, tinyere okporo ámá ndị nwere ọtụtụ akụkụ na obere okporo ụzọ.
Oge opupu ihe ubi bu ezigbo oge ileta Benidorm. Ọ bụ ezie na ọtụtụ na-ekwu na ọ bụghị, eziokwu bụ na ọ karịrị anyanwụ na ụsọ osimiri.
Benidorm nwere ezigbo obodo ochie nwere ụkwụ, nke nwere ọtụtụ ụlọ mmanya Ha na-eje ozi na tapas si na mpaghara Spen niile na nnukwu ikuku na mbara ala. Na mgbakwunye na mpaghara tapas, Benidorm nwere ụlọ nri dịgasị iche iche na-eje ozi kichin mba ofesi site n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke ụwa.
Nwekwara ike ịga na Mirador de Benidorm, nke bụ otu n'ime akara nke obodo ahụ ma jikọta osimiri abụọ ahụ. Site na nke a ị pụrụ ịnụ ụtọ na-akpali mmasị echiche nke anyanwụ dara na ọwụwa anyanwụ.
Valencia na-anabata anyị na ihu igwe na-acha anwụrụ ọkụ, mbara ala na-eche ka ejupụta ya na paellas kachasị mma nke Spain nwere ike ịnye, edoziri edozi na tebụl n'èzí. A gaghị enwe ọtụtụ mmadụ n'oge ọkọchị, ya mere anyị ga-enwe ụsọ osimiri ka anyị wee jee n'akụkụ ụsọ osimiri wee nwee ike rie ice cream.
Anyị nwere ike ịga na Obodo nke Arts, jegharịa n’obodo, ga Ogige BotanicalMa ọtụtụ ihe ndị ọzọ!
Córdoba na patio ya na May
Córdoba bụ ebe a na-ahụ anya na Spain na Mee, yana obe May na patios, ibo ụzọ, na osisi oroma na-ama ifuru. Tụnyere ọnwa ọ bụla ọzọ n'afọ, obodo ahụ juputara na ìhè na agba. Na mgbakwunye, n'ime ọnwa a ka a na-eme asọmpi Maystick a ma ama, ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ mepere patio ha n'ihu ọha, juputara na ifuru, nkọwa na nlebara anya nke ọma onye ọ bụla gafere.
Worldwa ama-alakụba-Katidral ga-eme ka ị daa ogbi, ma gafere n'akụkụ ndị Juu, nụrụ ụtọ tapas n'ụlọ ezumike ma chọpụta ụfọdụ akụ zoro ezo nke obodo ahụ, dị ka Viana Obí na Alcazar Gardens, ọ bụ ezigbo anụrị. Obodo ebighachiri azụ nke nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite na ngwakọta ọdịbendị dịgasị iche iche nke na-agaghị emechu ihu.
Sevilla ọ bụ ihe magburu onwe ebe n'oge nke afọ maka Eprel ngosi, nke bụ otu n'ime mmemme Andalus nke na-adịgide ruo oge opupu ihe ubi. Ọtụtụ ndị njem nleta na-ahọrọ Andalusia isi obodo ha mmiri getaway maka okooko osisi na icho mma ya n'okporo ámá, na ikuku ikuku nke ndị ya na ịma mma nke mpaghara ahụ.
Ileta flamenco na-egosi na Seville Ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị dị mkpa, yana ịgagharị na ncheta, na-agba ịnyịnya na ịnyịnya na-adọkpụ ma na-atọ ụtọ gastronomy mpaghara. Daysbọchị ole na ole ị ga-enwe ike ịmata ihe niile gbasara obodo ahụ. Njem njem izu ụka gaa Seville n'oge opupu ihe ubi ga-eme ka obodo ahụ hụ gị n'anya ma mee ka ịchọọ ịlaghachi n'oge ọ bụla n'afọ.
Ugbu a, ịmara obodo ndị Spain ị ga-eleta. Ebee ka ị ga-amalite njem njem njem gị? Cheta na ị ga-emegharịrịrị ka iwu nke ọnọdụ mberede nke Covid-19 nyere. Chọpụta ụkpụrụ nke obodo ọ bụla ma nwee ọ theụ njem ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Obodo kacha mma na Spanish iji ụgbọ ala gaa na mmiri